अनुहार लुकाएर किन हिँड्छन् अर्जुन कपूर ?
८ मंसिर २०७५, शनिबार १७:१६
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता अर्जुन कपूर यतिबेला प्रेम सम्बन्धका कारण चर्चामा छन् । केही दिनयता अर्जुन र मलाइका अराेडाको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । एकपटक पुन: यस्तै भएको छ । गएको रात यी दुई मुम्बईमा देखिएका थिए । त्यस क्रममा अर्जुन मिडियाबाट बच्न प्रयास गरिरहेको अवस्थामा देखिएका थिए । होटलबाट बाहिर निस्कने समयमा अर्जुनले आफ्नो अनुहार कपडाले छोपेका थिए ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार मलाइका र अर्जुनले आफ्नो प्रेम सम्बन्धलाई अफिसियल बनाइसकेका छन् । मलाइका धेरै जस्तो अर्जुनसँग क्वालिटी समय बिताउन उनको घरमै पुग्ने गरेको बताइएको छ । केही दिन पहिले मलाइकालाई अर्जुनको घरबाट बाहिरिँदै गर्दा क्यामेरामा कैद भएकी थिइन् । खबरलाई मान्ने हो भने अर्जुन र मलाइकाले वेडिङ डेट पनि तय गरिसकेका छन् ।
उता मलाइकाको एक्स पति अरबाजले पनि आफ्नी विदेशी गर्लफ्रेन्ड जियोर्जिया अंदरानीसँग बिहे गर्दैछन् । अर्जुन र मलाइकाको अफेयरबारे सबैलाई थाहा हुँदा पनि अर्जुन किन मुख लुकाउँछन् ? प्रश्न बनेर बसेका छन् अर्जुन ।
Tagsअर्जुन कपूर बलिउड मलाइका अरोडा